Safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo ka qayb galay Dood cilmiyeed looga hadlayay dhibaatooyinka Tahriibka ”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Suudaan Mudane Maxamed Cabdulaahi Ugaas Faarax ayaa habeenkii Xalay ahayd ka qayb galay Dood Cilmiyeed looga hadlayay Dhibaatooyinka ay leeyihiin Tahriibka iyo sidii loo joojin lahaa, doodaas oo ay soo abaabuleen Urur ay lagu magacaabo Kulanka Xarakooyinka Dacwooyinka Soomaaliya ee Suudaan.
Dood cilmiyeedkan oo ay Marti ku ahaayeen Culumo Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa Sheekh Maxamuud Maxamed Shibili ayaa ka hadlay Diin ahaan xukunka uu ka qabo Tahriibka iyo lacagaha laga tacbo oo ay ka helaan Muqalasiinta ka shaqeeya Tahriibinta iyo Xawaaladaha gacan ka geysta in ay fududeeyaan Tahriibinta.
Sheekh Shibili ayaa sheegay in dhamaan Xaaraan yihiin tahriibka isaga oo keenayay Sababaha Diin ahaan xaaraan u tahay tusaalena usoo qaatay in lacagta laga qaado Tahriibayaasha aan lala soo hishiin ee marka loo geeyo Magafe oo Liibaya jooga lagu amro qaraabada Tahriibaha lacag aysan awoodin bixinteeda oo aan hishiis iyo is afgarad ku dhisneen.
Dr.Cali Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlayay Dood Cilmiyeedkaas ayaa kasoo sheekeeyay dhibaatooyinka Tahriibayaasha soo maraan iyo wadooyinka kala duwan ay kasoo galaan isaga oo xusay qisooyin aad u murugo badan oo lagu sameeyay Tahriibayaal Soomaali ah oo la fara xumeeyay Gabdho iyo Wiilal isugu jira.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Suudaan Danjire Maxamed Cabdulaahu Ugaas Faarax ayaa isaga dhankiisa ka hadlay Dhibaatootinka Tahriibka ku haayo Umadda Soomaaliyeed gaar ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo maalin walba shilal gaari ah ugu dhimanaya Wadooyinka ka baxa Dalkan Suudaan ee aada Dalkaas Liibiya.
Danjire Maxamed Ugas ayaa sidoo kale sheegay in waxii hada ka dambeeya aysan marnaba la ogalaan doonin in Tahriibka sii socdo Safaaraddana ay talaabo adag ka qaadi doonto dhalin yarada ka shaqeeya wax tahriibinta.
Safiirka ayaa intaas kusii diray in Safaaradda oo kaashanaysa Dowladda Suudaan ay bilaabayaan dhawaan ola ole lagula dagaalamayo Tahriibka dhawaana war lagu farxo soo gaari doono dhagaha umadda Soomaaliyeed.
Ugu Dambeyntii Safiir Maxamed C/laahi Ugaas Faarax ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka shaqeysa Tahriibinta in Wadanka Suudaan isaga baxaan ka hor inta aysan Xabsi ku dhex dhibaatoon.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay shirmadaxeedka Jaamacadda Carabta ee Sharm El Sheikh “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay shirmadaxeedka Jaamacadda Carabta ee Sharm El Sheikh "SAWIRRO"